Eric Garcia oo go'an ka gaaray in uu si bilaasha ah ugu ciyaaro Kooxda Barcelona
Home Horyaalka Ingiriiska Eric Garcia oo go’an ka gaaray in uu si bilaasha ah ugu...
Eric Garcia oo go’an ka gaaray in uu si bilaasha ah ugu ciyaaro Kooxda Barcelona
Musharaxa madaxweynaha Barcelona Victor Font ayaa sheegtay in Eric Garcia uu aad u doonayo inuu kaga soo biiro kooxda Manchester City isla markaana uu doonayo inuu si bilaash ah ugu ciyaaro.
Tababaraha City Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay horaantii isbuucaan inuu rajeynayo in 20 jirkaan uu ka tago Etihad Stadium marka qandaraaskiisu dhacayo xagaaga.
Garcia ayaa isha ku haya inuu dib ugu laabto kooxdiisii ​​hore ee Barca, kuwaasoo heysta ikhtiyaar ah inay daafaca dhexe kusoo xerogeliyaan lix bilood ka hor lacag yar.
Sida laga soo xigtay Font, oo u tartamaya guusha Josep Maria Bartomeu bisha Maarso ee la qorsheeyay doorashada Camp Nou, Garcia wuxuu diyaar u yahay inuu iska dhaafo wax mushaar ah ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
“Waxaan ka codsaneynaa guddiga ku meel gaarka ah inay la soo saxiixdaan Eric Garcia,” ayuu u sheegay suxufiyiinta. “Ronald] Koeman.
“Waxa uu aasaas u noqon lahaa dagaalka seddex koob ee xilli ciyaareedkan. Waan ognahay in City aqbali doonto € 3m iyo lacag lagu daro mana ahan inaan wax lacag ah siino ilaa xilli ciyaareedka soo socda – taasi waa wax aad uga yar intii ay Barca soo bandhigtay afar bilood ka hor.
Ciyaaryahanka ayaa sidoo kale diyaar u ah inuu sameeyo dadaal weyn oo aan la siin doonin wax mushahar ah ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka. ”
Garcia ayaa labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay ku qaatay kooxda koowaad ee City, waxaana uu sideed kulan u saftay tartamada oo dhan ololahan.
Previous articleWadahadaladii heshiis kordhinta Real Madrid ee Sergio Ramos oo burburay
Next article10-ka dhalinyarada ah ee leh himilooyinka ugu badan & caawinta 2020-21: Saka, Pedri, Reyna…